Madaxweynaha Nigeria oo ka shifay hantidiisa. - Wargeyska Faafiye
Madaxweynaha Nigeria oo ka shifay hantidiisa.
Madaxweynaha dalka Nigeria, Mohammadu Buhari ayaa u gudbiyay Hay’adda Xisaabo Xilmaleh hantida uu Madaxweynuhu gaarka u leeyahay, tanina waxay qeyb ka tahay dadaal lagu dardargalinayo la dagaalanka musuqmaasuqa.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsMali rebels declare independent 'Azawad'Shirarka & munaasabadaha oo laga digayOdayaasha dhaqanka: Shabaab ha la sifeeyo Baay iyo Bakool.Askari Kenyan ah oo loo xiray dilka 6 qof oo somali ah .Dakhliga xukuumadda Soomaaliya oo sare u kacay.